Maxaa ku soo kordhay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
In center of attention: the 58th ECOWAS Summit
Combating intensifies within the border the town as troops
Jubaland troops take keep an eye on of SNA’s Baled-Hawo
“Waxaan xirnay ilaa 100 maxaabiis dagaal ah oo ku xirnaa Balad Xaawo” ayuu yiri…
Maxaa kordhiyay khasaaraha dagaalka Balad Xaawo? – Axadle
Cabdiwali Turmaag ayaa 5 caruur ah ku dilay hoobiye lagu weeraray gurigiisa! –…
Jubbaland oo saraakiil iyo askar u xirtay dil toogasho ah – Axadle Raadiyaha
By axadle	 On Jan 7, 2021
Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo khamiistii ka dhacay afaafka hore ee dugsiga hoyga Xamar oo ku dhow madaxweynihii hore ee C / qaasim ee u dhexeeya isgoyska KM4 iyo garoonka degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Goobjoogayaasha ayaa sidoo kale soo sheegaya in gawaarida qaraxa oo uu la socday abaanduulaha ciidamada milateriga Jeneraal Dhanka Aadam, laakiin uu ka badbaaday, qaraxa ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof, sida laga soo xigtay amniga Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Hodan oo ka hadlay qaraxa ayaa sheegay in afar askari iyo hal qof oo shacab ah ay dhinteen, welina ay socdaan baaritaanno kale.
“Waxaan xirnay ilaa 100 maxaabiis dagaal ah oo ku xirnaa Balad Xaawo”…
Mid ka mid ah askarta qaraxa ku dhimatay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqani Xasan Fayl, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxa, iyadoo sheegtay inuu si dirqi ah uga badbaaday inuu dilo Taliyaha Ciidanka Asluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan.
Xalay, qarax miino oo lagu aasay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday gaari uu lahaa afhayeenka booliska, waxaana ku dhintay qof rayid ah oo goobta ka ag dhawaa.
Wadada isku xirta KM4 iyo Tarabuun oo in mudo ah xirneyd ayaa waxaa dib u furtay xukuumada R / wasaare Max’ed Xuseen Rooble, waxaana dhowr jeer weerar ku qaaday saraakiil ciidan iyo saraakiil ka tirsan dowlada.
axadle 6226 posts
The UN welcomes the capture of Libyan rivals during